Iindaba -I-China kunye neNew Zealand ngoLwesibini batyikitye umthetho olandelwayo wokuphucula isivumelwano sabo sokurhweba ngokukhululekileyo seminyaka eli-12 (FTA)
I-China ne-New Zealand ngolwe-Lwesibini batyikitye umgaqo-nkqubo wokuphucula isivumelwano sabo sokuthengisa simahla seminyaka eli-12 (FTA), ekulindeleke ukuba sizise izibonelelo ngakumbi kumashishini nakubantu bala mazwe mabini.
Ukuphuculwa kwe-FTA kongeza izahluko ezitsha kurhwebo lwe-elektroniki, ukuthengwa kwenkonzo kukarhulumente, umgaqo-nkqubo wokhuphiswano kunye nokusingqongileyo kunye norhwebo, ukongeza kuphuculo kwimithetho yemvelaphi, iinkqubo zamasiko kunye nokwenza lula urhwebo, izithintelo zobuchwephesha kurhwebo norhwebo kwiinkonzo. Ngokwesiseko soBambiswano lwezoQoqosho oluBanzi loMmandla, i-China iza kuthi gqolo ikwandise ukuvulwa kwayo kumacandelo kubandakanya ezokuhamba ngenqwelomoya, ezemfundo, ezemali, ukhathalelo lwabantu abadala, kunye nokuthuthwa kwabakhweli ukuya eNew Zealand ukukhulisa urhwebo lweenkonzo. Ukuphuculwa kwe-FTA kuyawabona omabini la mazwe evula iimarike zabo zeemveliso ezithile zomthi kunye nephepha.
INew Zealand iya kuwunciphisa umda wayo wokuphonononga utyalomali lwaseTshayina, ivumele ukuba ifumane unyango olufanayo lokuphononongwa njengamalungu esiVumelwano esiBanzi nesiqhubela phambili seNtsebenziswano yeTrans-Pacific (CPTPP).
Iphindaphinde isabelo sootitshala baseTshayina baseMandarin kunye nezikhokelo zabakhenkethi baseTshayina abasebenza kweli lizwe ukuya kuma-300 nama-200 ngokwahlukeneyo.
Uqoqosho lwase-US luye lwangena kwisivumelwano sepesenti ye-3.5 kwi-2020 phakathi kwe-COVID-19 fallout, ukwehla okukhulu ngonyaka kwimveliso yasekhaya yase-US (GDP) ukusukela ngo-1946, ngokweenkcukacha ezikhutshwe liSebe lezoRhwebo lase-US ngoLwesine.
Ukwehla okuqikelelweyo kwi-GDP yowama-2020 yaba kokokuqala ukwehla okunjalo ukusukela oko kwehla nge-2.5% ngo-2009. Leyo yayiyingxaki enkulu yonyaka ukusukela oko uqoqosho lwancipha nge-11.6% ngo-1946.
Idatha ikwabonakalise ukuba uqoqosho lwase-US lukhule ngezinga lonyaka leepesenti ezi-4 kwikota yesine yowama-2020 phakathi kokunyuka kwamatyala e-COVID-19, ethe chu kuneepesenti ezingama-33.4 kwikota edlulileyo.
Uqoqosho luye lwehla kuqoqosho ngoFebruwari, inyanga phambi kokuba uMbutho wezeMpilo weHlabathi ubhengeze uCovid-19 ubhubhane.
Uqoqosho luye lwaqeshwa kwirekhodi yoxinzelelo lwasemva koxinzelelo lwama-31.4% kwikota yesibini emva koko laphinda lafumana inzuzo engama-33.4% kwezi nyanga zintathu zilandelayo.
Ingxelo yangoLwesine yayiliqikelelo lokuqala lweSebe lezoRhwebo lokukhula kwekota.
"Ukonyuka kwekota yesine ye-GDP ibonakalise ukukhula okuqhubekayo kwezoqoqosho ukusuka ekunciphiseni okuthe kratya ekuqaleni konyaka kunye nefuthe eliqhubekayo lobhubhane we-COVID-19, kubandakanya izithintelo ezintsha kunye nokuvalwa okuqale ukusebenza kwezinye iindawo zaseMelika," latsho isebe kwingxelo.
Ngaphandle kokuphinda-phinda kwezoqoqosho kwisiqingatha sesibini sonyaka ophelileyo, uqoqosho lwase-US lwehle nge-3.5 yepesenti kunyaka wonke we-2020, xa kuthelekiswa nokunyuka kweepesenti ze-2.2 kwi-2019, ngokwesebe.
Ixesha Post: Apr-29-2021